केपी शर्मा ओली को हो र पार्टीबाट निकाल्न नसक्ने ? - Sidha News
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य डा. बेदुराम भुषालले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नहुँदैमा पार्टी नचल्ने भन्ने नहुने बताएका छन् । नेकपाभित्र किचलो बढिरहँदा अध्यक्ष ओली पार्टीको सचिवालय बैठकमा उपस्थित नहुने संकेत गरिरहँदा यदि उपस्थित नहुने हो भने अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने भुषालले तर्क गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कसँगको कुराकानीमा भुषालले ‘बैठकमा सहभागीता जनाउन नसक्ने हो भने उहाँलाई फुर्सद छैन अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।’ ओली बिना पार्टी चल्न सक्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले ‘केपी ओली को हो र पार्टीबाट निकाल्न नसक्ने ?’ भनी जवाफ दिएका छन् । उनले ओली एउटा व्यक्ति भएको भन्दै संस्थागत निर्णय महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले व्यक्तिले म जे भन्छु त्यही हुनपर्छ भन्छ भने त्यो मान्य नहुने बताए ।
पार्टी यहाँसम्म विवादित हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोषी ओली नै भएको भुषालले बताए । उनले पार्टीको विधान अनुसार ओली नचलेकै कारण विवाद यहाँसम्म आएको बताए । पार्टी एकता भएको तीन महिनाभित्र पूर्ण एकता गर्ने र दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएकामा त्यो पूरा नहुनु ओलीकै कारण भएको समेत भुषालले आरोप लगाए । पहिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र अहिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा आपत्ति जनाउनु नै ओलीको व्यक्तिवादी चरित्र भएको भन्दै यसबाट उनी मुक्त हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
ओलीले धेरै गल्ती गरेकाले आफूलाई हटाउँछन् कि भन्दै कुन्ठा पालेर बसेका कारण डराएर बैठकहरुबाट पछाडि हट्न खोजेको आरोपसमेत भुषालले बताए ।
नेकपाको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक २८ गते ओलीलाई आरोपसहितको राजनीतिक प्रतिवदेन पेश गरेपछि ओलीले पनि मंसिर १३ गते प्रचण्डलाई आरोपसहित छुट्टै प्रतिवेदन ल्याएका थिए ।
त्यसपछि दुवै पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । यसबाट बच्नका लागि ओलीले बैठक स्थगित गर्न माग गरेको आरोपसमेत लागेको छ । यसअघिको निर्णयानुसार सचिवालय बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बालुवाटारमा बस्दैछ । मंसिर १८ गते स्थायी कमिटी बैठक र मंसिर २५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । तर ओलीले भने बैठक पछि सार्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।